चीनले बनाएको कोरोना वि रुद्धको खोप नेपाल आउँदै – Eshankharapur
बल्ल आयो अस्पतालमा मान्छे म’र्नुको भित्री र’हस्य, राति १२ बजेनै यस्तो भएको रहेछ, को हो दो’षी ? हेर्नुस यस्तो रैछ खास बास्तबिकता
जनताले तिरेको करबाट भात , भत्ता र कुर्सी पड्काएर तीनै जनतालाई पाखे भन्न लाज लागेन?
असोज ०८ गते बिहिबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल
सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न नदिने ! फेरि आयो यस्तो खबर
देशभर फेरि एक महिना लकडाउन
अब विद्यालयका कक्षा पनि जोर बिजोर प्रणालीमा संचालन गरिने, यस्तो आयो निर्णय !
स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा फेरि लकडाउन गर्न सिफारिस” दशैंमा लकडाउनहुने पक्का !
साढे तीन लाखमै नेपालमै बन्छ यस्तो आकर्षक घर !हेर्नुहोस(भिडियो सहित)
खुसिको खबर – दशैंको अफरमा आयो अहिले सम्मकै सस्तो मु`ल्यको पल्सर बाइक !
नखानुहोस यस्ता कुराहरू जसले तपाईको चॉडै तालु खुइलाईदिन्छ
मुख्य पृष्ठ /Corona (COVID-19) Updates/चीनले बनाएको कोरोना वि रुद्धको खोप नेपाल आउँदै
Corona (COVID-19) Updates
चीनले बनाएको कोरोना वि रुद्धको खोप नेपाल आउँदै
242 1 minute read
काठमाडौँ – चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले निर्माण गरेको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) विरुद्धको खोप नेपालमा ल्याइने भएको छ । खोपको तेस्रो चरणको परीक्षणका लागि नेपाल ल्याउन लागिएको हो ।
चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले नेपाल लगायत विश्वभरका विभिन्न देशहरुमा परिक्षण गर्ने क्रममा नेपालमा पनि आउन लागेको हो । खोप परीक्षणको लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिसकेको जनाइएको छ । यो खोप चीन सरकारले परिक्षणका लागि अनुमति दिएपछि तेश्रो चरणको परिक्षण थालिएको हो ।
खोप परीक्षणको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्र पठाएको र त्यसबारे परराष्ट्र र राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदबीच विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ । नेपालमा औषधि तथा खोपहरूको परीक्षणको नियमन गर्ने अधिकार राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदलाई छ ।
चीनले नेपालमा पहिलो परीक्षण आफ्नै नागरिकमाथि गर्ने तयारी गरिरहेको छ । चीनले होङ्सी सिमेन्टमा कार्यरत चिनियाँ कामदारमाथि पहिलो परीक्षण गर्ने तयारी गरेको दूतावास स्रोतले जनाएको छ । होङ्सी सिमेन्टका निर्देशक सतीश मोरले पनि खोप परीक्षणको लागि छलफल भइरहेको बताए । उनले परीक्षणको लागि चीनबाट खोप मगाउन कोशिश गरिरहेको बताउँदै नेपाल र चीन दुबै सरकारले अनुमति दिएमात्रै सम्भव हुने बताए ।
होङ्सी सिमेन्ट नेपालकै सबैभन्दा ठूलो मानिन्छ । उक्त सिमेन्ट कारखानामा चीनको होङ्सी समूह अन्तर्गतको हङकङ रेड लायन नम्बर ३ सिमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको ७० प्रतिशत र नेपालको शिवम सिमेन्टको ३० प्रतिशत लगानी छ । होङसीमा २ सय भन्दा बढी चिनियाँ कार्यरत छन् । खोप परीक्षणको लागि कम्पनीले फारम भरिरहेको छ । नेपाली कामदार राजिखुशीले परीक्षणको लागि तयार भएमा उनीहरुको पनि गर्ने बताइएको छ ।
खोपको तेस्रो परीक्षणको लागि चीनले नेपाल आउन चाहेको स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अधिकारीहरु बताउँछन् । त्यसको लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नेबारे परिषदले गृहकार्य अगाडि बढाएको छ ।
चिनियाँ खोपको तेस्रो चरणको परीक्षण यूएई, ब्राजिल र साउदी अरेबीयामा सुरु भइसकेको छ भने पेरू र इन्डोनेशियाले पनि परीक्षणमा सहभागी हुने निर्णय गरेका छन् । नेपालमा पनि जनमुक्ति सेनाले तयार गरेको खोपको परीक्षण गर्न लागिएको हो ।
कोरोनाको नेगेटिभ रिपोर्ट आएपछि ऐश्वर्या र आराध्या डिस्चार्ज, अमिताभ र अभिषेक अस्पतालमै
चीनसँग जोडिएको जिल्ला भएर पनि को’रोनामुक्त छ रसुवा
बाँकेको क्वारेन्टिनमा निधन भएका युवकमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि, सेना र प्रहरीद्धारा अन्त्यष्टिको तयारी
स्यानिटाइजरको प्रयोग स्वा`स्थ्यका लागि ख`तर `नाक पनि ! पुरा पढ्नुहोस !
एउटै कोरोना रिपोर्ट कतै पोजेटिभ कतै नेगेटिभ
साढे तीन लाखमै नेपालमै बन्छ यस्तो आकर्षक घर !
अब पार्टीको झण्डा होइन, राष्ट्रिय झण्डा बोकेर एक जुट हो औं !!एक शेयर अवस्य गर्नुहोला !!
त्रि बि को परिक्षा सम्बधि जरुरि सूचना पुरा हेरी सबैको जानकारीको लागि शेयर गर्नुहोला !
घरको छतबाट आवाज आइरहन्थ्यो, ६ महिनापछि हेर्दा सबै जना चकित
नेपाली छोरा दिबेशले अमेरिकामा नेपाल को नाम चिनाई राख्दा, उहाँलाई १ शेयर गरेर अझै अगाडि बढ्न हौसला दिउँ।।
Bollywood News & Updates
Local News( SHANKHARAPUR)
Nepali Filmy News & Updates
स्वस्थानी व्रत कथा